Nwere ike mgbatị ahụ na abs? - Mmega
Isi > Mmega > Abs na mgbatị ahụ - ịza ajụjụ ndị a
Abs na mgbatị ahụ - ịza ajụjụ ndị a
Nwere ike mgbatị ahụ na abs?
Ntughari gi na absakwara nwere ike ọ gaghị adị ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ, mana na-emekọ ihebutt na abs mgbatị nwere ikebụrụ ụzọ dị irè iji rụọ ọrụnke giakwara na-arụ ọrụ nke ọma na n'enweghị nsogbu, ka Cristina Osorio, onye na-enye ọzụzụ na mgbatị ahụ dabeere na Las Vegas, TruFusion na-akọwa. 'Ahụ na-arụkọ ọrụ ọnụ, akwara niile dịka otu, 'Osorio gwara SELF.10 nke 2016 Nọvemba
Ekele m gị, nabata ihe omume ụbọchị 26. Ugbu a nke a bụ ihe omume 1 na-ezubere iche maka afọ na but n'otu oge. Nwere ike ịchọta kalenda nke mmemme a n'efu ebe a, usoro hourglass a zuru oke maka ndị mbido na ndị ọrụ dị elu ma ga - enyere gị aka ịkwadebe maka mmemme ịkwakoro ihe na-abịanụ nke gụnyere nkwụsi ike echefula ịkọkọrịta ọganihu gị ka ọ bụrụ na ngwụcha nke mmemme ahụ Enwere m ike ịdekọpụta nsonaazụ nsonaazụ ma bido ịmalite, ọ dị mma, anyị nwere mmemme 22 taa 30 ruo 60 sekọnd na 5 ruo 15 sekọnd apụ Anyị na-amalite site na ikpere abụọ dị elu Mee oke ikpere nwayọ nwayọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibiaghachi-free version na ala mmetụta Naanị ihe omume anọ mbụ na-eguzo ọtọ, ebe ndị ọzọ nọ n'ala anyị nwere obere mkpirisi 5 nke abụọ ma mee ụkwụ ụkwụ ole na ole na-ebili maka nkeji oge, akpa ume azụ na mgbe ị laghachiri, bulie otu ụkwụ ahụ wee gafee ụkwụ nke ọzọ ị ga-eche nke a na akwara gị Na-esote, anyị nwere mkpịsị ụkwụ mkpịsị ụkwụ ọzọ iji bulie otu ụkwụ ka ị na-emetụ aka nke ọzọ aka na-enweghị ịda mbà na nhazi gị dịka m na-eme mgbe niile.
Ọ dị mma, oge ịme obere squats, nke a bụ mmega ahụ ikpeazụ, yabụ gbadaa dị ka i nwere ike ma bulie ụkwụ gị n'akụkụ ma anyị na-atụgharị anya inwe nkeji oge ya. Ya mere, hapụ ya ka ọ gbaa ọkụ, ụmụ okorobịa. Ọ dị mma, yabụ ka anyị dina n'ala ma anyị ga-eme akwa mmiri otu ụkwụ nwere ụkwụ abụọ.
Gbalia ihu na ijidesi isi gi ike ma pinye gi úkwù na mpụga. Naanị na-akwalite ụmụ okorobịa. Ugbu a n'akụkụ nke ọzọ.
Ugbu a tụgharịa, anyị ga-eweli ụkwụ gị rụọ ọrụ. Weghachite ụkwụ ahụ ma hụ na ị pịrị apị ma mee ka isi ahụ sie ike. Anyị enwetala otu nkeji maka nwoke a ka ọ rụọ ọrụ na azụ na ahụ.
Ugbu a, afọ gị n'elu ihe mgbochi anyị ga-eme nkụkọ mmiri abụọ, nke a ga-arụ ọrụ ahụ ọfụma ma hụ na ị pịrị glut ndị ahụ ka ị na-agbanye ụkwụ gị. Ugbu a laghachi azụ na plank ma chee na ala ahụ bụ mgbidi kwụ ọtọ ma gbagoo mgbidi ahụ dị ka onye na-emeghachi ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na abs na obliques. Ugbu a tụgharịa ọzọ ma ọ bụ oge iji zụọ isi ahụ na ụfọdụ ịnyịnya ígwè.
Gbado anya na iku ume gị na iku ume oge ọ bụla ị na-akụda. Anyị nwere ọkụ ọkụ nke na-eweli ụkwụ gị na akụkụ ogo 45 ma nke a na-arụ ọrụ n'akụkụ akụkụ gị na isi gị. Anyị na-agafe ọkara mgbatị ahụ.
Made mere ya ugbu a ka ịchela echiche ịkwụsị ugbu a Ugbu a n'akụkụ nke ọzọ Ugbu a, nọdụ na bum gị ma anyị ga-eme ụfọdụ ntụgharị Russia. Ekwesịrị m ichetara gị otu oge iji rụọ ọrụ ahụ ma tinye ndị ahụ n'ime ọnọdụ dị ala ma anyị ga-eme ịnyịnya ibu ka ị na-ejide okwu ndị a. Cheta, na nke a bụ ebe ị na-agbalị na-arụ ọrụ gị glutes ụmụ okorobịa.
Ọ bụ ihe ịma aka mana ị na-amụnye ọkụ. Ugbu a bilie na ụkwụ anọ ma anyị na-arụ ọrụ n'otu ụkwụ n'otu oge na-ebuli ụfọdụ ụkwụ na-esochi usu ugbu a na ụkwụ nke ọzọ. Easy takeaway exercises Guys don't give now now nọrọ ebe ị nọ ma anyị na-eme ụfọdụ plank jacks ugbu a anọ na anọ ma anyị na-eji aka ekpe gị mee ịnyịnya ibu ụkwụ ma ugbu a n'akụkụ nke ọzọ ugbu a na-ewere ọnọdụ dị elu ma na-eme nkịta nnụnụ ebe ị na-eweli otu ogwe aka na ụkwụ nke ọzọ. Nke ahụ na-arụ ọrụ ahụ dum, ọkachasị isi na mmejọ gị yana naanị mmemme abụọ maka ụmụ okorobịa na mmega ikpeazụ.
Anyị na-eme àkwà mmiri, na-atụ n'úkwù ndị ahụ n'ikuku, na-afanyekwa ihe ndị ahụ. Anyị nwere oge zuru ezu na ya. Ya mere, na-agbanye n'ime ụmụ okorobịa na nke a bụ ụmụ nwoke ọzụzụ m nwere olileanya na ị nwere obi ụtọ na ya ma echefula ịgafe mkpịsị aka gị ma gbanye ọkwa ka ị ghara ịhapụ ihe omume ndị ọzọ na-abịanụ ma anyị ga-ahụ na ị zụrụ na nke ozo. ka ọ dị
Kedụ ka m ga-esi mee ka afọ m na ụda m ada ụda?
Mgbe mgbatị gị gasịrị, wetuo obi site na ịgbatị nkeji ise.
Squats: nnukwu maka ikebomsna apata ụkwụ.
Lunges: nnukwu maka ikebomsna apata ụkwụ.
Nwa ehi na-ebili: akwa maka ụkwụ na ụmụ ehi.
Bridges: nnukwu maka ikeboms.
Afọcrunches: akwa maka ikeNgalaba.
Obliques: nnukwu makaingghaịhụnanya ịlesụ.
Nabata na mgbatị a! Taa anyị na-arụ ọrụ na abụba afọ, buttocks na thighs.
Ka a pụọ! Anyị na-amalite site na ịgbagharị hipị na - enweta ị maara, hips gị na-agbanye sexy niile ma tinye ogwe aka gị Ọ dị mma maka ikpokọta ahụ gị niile, na-eme ka ị nwee ọnọdụ, na-enwe mmekọahụ.
N'ihi na ọ bụ gị! ma ọ bụghị n'ezie. Na ị na-emegharị otu akụkụ n'akụkụ n'ihi na ị nwere nke ahụ, ị ​​mara, Aka ekpe, Aka nri, Aka ekpe, Aka nri, nke ahụ bụ ihe ị ga - eme. Debe ezumike gị.
Ọ na-aga nke ọma ọzọ! ROCKING SQUATS Na na na, ọzọ anyị nwere hip siwing
HIP SWING ọzọ, mee ka abs gị na-agagharị Gbakwunye ogwe aka gi, anyi choro ka aru gi nile na-ekpo oku, mgbatị a bu ngwa ngwa, iwe na iwe, o di egwu! HIP SWINGS Gaa n'ihu! Know mara na ịchọrọ ịmịgharị n'akụkụ akụkụ, nke a bụ usoro ikpeazụ maka ikpo ọkụ mgbe anyị banyechara ọzụzụ ka m gwa gị n'ọdịnihu na ị ga-enwe obi ụtọ na ị zụrụ taa! Ị dịla njikere? You dịla njikere ma ọlị? Echere m na ị bụ. Ọ dị mma ka anyị bido Nzọụkwụ mbụ anyị ga-abụ otu nri ehihie dịka ị hụrụ m ebe a ịchọrọ ijide n'aka na isi gị nọ n'ọrụ ma na-awụlikwa elu site n'akụkụ ruo n'akụkụ na-enweghị ụkwụ gị na-agagharị. Ka anyị mee ya! Akụkụ dị mma nke ahụ dị mma! Are na-eme nke ọma! Na-eme nke ọma.
Gaba! Ọ bụ ihe mbụ, mee ike gị niile! Mma! Ezi! Ka ndị na-abaghị uru! Egwu! LATERAL LUNGE Gbalịa ka ị ghara ikwe ka ikpere gị gafee mkpịsị ụkwụ gị, mana ọ bụrụ na ọ ga-eme obere n ’ihi na ị nwere ụkwụ ogologo ma ọ bụ maka ihe ọ bụla, ọ dị mma. Ọ dị mma, naanị overdo ọ bụghị na ị nweta ihe m na-ekwu ya? na naa, lee ebe a na-atọ ụtọ naanị ịgba egwu ya chi m nke ahụ dị ukwuu! ka anyị gaa na squatsSQUATS cheta ime ka ị na-anọdụ ala na oche nke ọma, Ọfọn! Naanị 30 sekọndSQUATS Gaa, gawa, gawa, gawa. Akwụsịla! SQUATS Gbalịa ka ị ghara ikwe ka ikpere gị gafee mkpịsị ụkwụ gị, obere ihe dị mma, mana oke oke adịghị mma maka gị, ọ dị mma! Naanị ole na ole ndị ọzọ, dị ukwuu! Chika Okpala - Okechukwu Nyerem Full Music Lee gị nwa agbọghọ Nke ahụ dị mma! Ọ dị mma, anyị ga-egbu egbu ebe a.
Anaghị m eji arọ. Ma oburu na inwere igwe eji edoro nke oma, odi nma. Naanị jide n'aka na nkwụsị gị siri ike na azụ gị dị larịị DEADLIFT Mee ka ndị ahụ na-arụsi ọrụ ike ma mee ka hà na-ebuli ụfọdụ dumbbells si n'ala.
Isi ihe dị ebe a bụ ijide n'aka na azụ gị dị larịị n'oge njem a, ị na-emekwu nke ọma na ị maraworị ihe ga-abịa, ị maraworị. Ị dịla njikere? Ka anyi gaa FREESTYLE DANCE Oh! Nke ahụ mara mma! Ọzọ, ị nwere nkwanye ume na ọ ga - adị mfe ma ị mechaa mgbatị m. Already maraworị otu esi eme nke a.
Debe ezumike gị. Anyị na-eme akpa ume niile maka ọkwa mbụ ahụ n'otu ụkwụ. Ị dịla njikere? ? Ka anyị gaa, ka anyị gawa! Agwara m gị na nke a bụ ọsọ ọsọ, nke a bụ iwe Anyị abịaghị ebe a maka egwuregwuGood! Gaa n'ihu, buru nnukwu usoro a n'ihu.
Ekwela ka ikpere azụ gị metụta ala. Mgbe niile na-abs gị na-akpụ akpụ, M hụrụ n'anya ihe ị na-eme! Great mara mma! N'ihu na-aga n'ihu Cheta, ọ bụ naanị otu ụkwụ. Ọ bụ otu ụkwụ.
Anyị chọrọ ịpụ ụkwụ ahụ, ị ​​marala ihe anyị ga-eme ọzọ, ị chọghị? Gaba? Gaba! FREESTYLE DANCE! Nweta ya Beyonce! Anyị ga-eme akpa ume na ụkwụ nke ọzọ Otu ihe ahụ, abs bụ TenseBig nzọụkwụ na-aga n'ihuBack ikpere emetụghị ala. Anyị ga-egbu ya, ka anyị gaa! Mee ihe kachasị mma, mee ike gị niile! Gaa maka ya! Know maara ihe na-esote, ị maghị? Ka anyị gbaa egwu! FREESTYLE DANCE Anyị na-alaghachi n’akụkụ ndị ọzọ n’akụkụ ahụ, mee ka ọrụ gị ghara ịna-arụ ọrụ ma sikwa n’akụkụ kpọba n’akụkụ. Ị dịla njikere? Ọ dị mma, ka anyị mee ọnụ ọnụ PAGE LUNG Dị mma, dị mma! Nọgide na-abanye omimi dị ka ị nwere ike, mana agala oke.
Mee naanị ike gị, ịkwaga! Nke ahụ bụ ihe niile dị mkpa. Naanị obere sekọnd ọzọ na ị marala otu esi eme ya! Ka a pụọ! FREESTYLE DANCE! Ysmụ okorobịa, squats, ya mere, ka anyị laghachite na ndị squats, debe gị abs ọrụ na nke a gburugburu nke squats, anyị na-aga n'ihi na ọsọ. Ya mere, gaa ngwa ngwa dị ka i nwere ike.
Echegbula, nkwụsịtụ gị na-abịa. nwetara nke ahụ! Here nọ ebe a! You're nọ ebe a ma ị mee nke a Gaa n'ihu! Gaba! Push, push, push, push, pushSQUATS Naanị ole na ole ọzọ, naanị mee ya! Mee ya, ị nwere ike ijikwa ya, ị nwere nke a! Ọ fọrọ nke nta ka akụkụ ahụ dị ụtọ Ọ dị mma ka anyị gbaa egwu! FREESTYLE DANCE! Na-enwe obi ụtọ na mgbatị a, ị maara ị na-egbu mmụọ, na-a ,ụ ma na-eme ka ị na-adọpụ dumbbells n'ụkwụ gị? Echere m na ị nwere ike.
Amaara m na ị mere. Ka a pụọ! AKW DEKWỌ mgbe ahụ anyị nwere agba agba ọzọ ọzọ ma ị ga-ezumike. Nke ahụ abụghị nnukwu! Aga n'ihu, dịkwuo ikwekọ abs.
Ezi! Nọrọ n'ihu! Ọ dị mma! Nye m ihe kachasị mma, ihe kacha mma ị ga - emeFREESTYLE DANCE! Nke ahụ dị ịtụnanya! Were otu obere izu ike ma ọ bụrụ na ịchọrọ ezumike ogologo ị nwere ike ịkwụsịtụ edemede ahụ. Nke ahụ dị mma. Ana m akwado nke ahụ.
Ọ bụrụ na ịmebeghị ya Yabụ nke abụọ wee denye aha na ọwa youtube m, ọ bụ n'efu maka gị! na ọ na-eme m obi ụtọ! biko denye aha na ọwa youtube m, daalụ. Daalụ nke ukwuu! Ọ ga-esiri m ike ịghara ịkwọ abụ n'oge ezumike a, m ga-agwa gị na m ga-agwa gị! Ọ dị nwute REST ka anyị banye n'akụkụ lungesAbs nọ n'ọrụ ma tụfuo onwe gị site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ.
Anyị nwere naanị 30 sekọnd ya Can nwere ike ijikwa 30 sekọnd ya? Amaara m na ị nwere ike! Ka a pụọ! Akụkụ L dị mma! Are na-eme nke ọma! Mere ihe karịrị ọkara mgbatị ahụ a you nwere ike ikwere ya! Na-eme nke a nnukwu! Gaba! Ọ dị mma, ị marala ihe na-esote Ghaa ya, maa jijiji, ghaa ya, maa jijiji .FREESTYLE DANCE!
Ndi squats na-eme ka but gị buru ibu?
Ikukusquatsdị ukwuu maka ndị mbido, mana ọ bụrụgịanọwo naedetun'ihi na ihe karịrị ọnwa isii na-adịghị hụrụisi gina-enwetaibu,gịkwesịrị ịgbakwunye ibu, ka Arias na-ekwu. Dị ka akwara ọ bụla,gịnwere dịkwuo eguzogide iji makanke gina-aga n'ihutoo.Ọgọst 6 2020
Ya mere ndi mmadu, taa bu ubochi mbu nke 100 Squat Challenge. Emebeghị m squats 100 n’usoro n’ime ụbọchị iri atọ. Ya mere echere m na ọ ga-adị ezigbo mma ịhụ ma ọ bụrụ na ihe agbanwee na mpaghara anụ oriri, teepu m na ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụ etu esi atụ eriri gị ma ọ bụ buttocks, gaa maka ya.
N'ụzọ bụ isi, ị na-agbazi teepu gburugburu n'ọnụ ọnụ mpi gị, nke dị m nso, nke ahụ bụ ihe niile m nwere nke ahụ bụ maka mkpụrụ ndụ ihe nketa m Asia, ma ọ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa m. Nwanne m nwanyi nwere nkpuru oma. Ọ dị mma ka ị na-aga ebe ahụ, ụkwụ ọnụ, weta ya n'úkwù gị. 37 na otu ụzọ n'ụzọ anọ.
Ọ dị mma ee ee nke a bụ ụbọchị mbụ. Anyị ga-ahụ ihe na-eme na ụbọchị 30! Ihu igwe dị mma na LA. Taa zuru oke. - Amaara m na ọ dị mma ịgwakọta ya otu a.
Know mara, jiri ya mee ihe dị ka ugboro 15. - Ala ma bulie ya. Gaa! - Ala - --- ma bulie. See hụrụ, ọ bụghị ihe ọjọọ.- Ana m akwadebe maka njegharị.- Ee! - Ọ bụ ya.
Gị na-elekwasị anya. E nwere ya. Ọ bụ ụzọ dị mma - Ee, enwere m ịnụ ka ị na-ekwu okwu. (ọchị) - Ee, hips na-ekwu okwu.
Hirgagharị gburugburu. - Ahụrụ m akụkọ banyere ihe na-akpali akpali na nkwupụta m na-eri site n’aka ndị mmadụ na-agbanwe ndụ ha. - Francis abata, ee! (Otu mkparịta ụka) - 50-50! Anyị agarala ọkara ebe ahụ. (Nkịta na-eto eto) Kwụsị ịbụ ndị ọchị! Ọ dị m nwute! - gbagọrọ agbagọ ọkara.
Ala na elu. Ala na elu. Enwere m ikiri ụkwụ ole na ole dịka, ụkwụ biko, ahapụna m taa. (chuckle) Oh nwoke.
You riela nri ụtụtụ onye ọ bụla ị bụ n’ụwa? Squats kwa ụbọchị. You zụọla taa? - Emere m ya tupu nke ahụ, yabụ na ọ bụghị ya bụ echiche kacha mma. - Ọ bụ ihe ijuanya makana m ka na-agụta isi m - Agụla! Mepee ubu ubu gị. (na-eze ume) Anyị na-agbada ma - Gaa miri emi! - Enweghị m ike! - Ee, ị ga-.- Mgbe m ga-miri miri, m ga-ada n’ala - Woo! Na-eche ndị gluts ahụ, na-eche quads ndị a. (Igwefoto ọchị) - Ìgwè mmadụ ahụ na-ebigbọ! - Onye ozo, nye m ya.- Oh Chukwu m.- 10, itoolu, asatọ, mmadụ 7.77, anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ.- Anọ m n'ọkụ! - Woo! Chei! - Unu, M na-anwụ.
Aga m ada - ma jide ubu aka gị na oche gị. Nke gi --- Woo, Efuola m nguzosi ike. (chịrị ọchị) - Oh, ọ dị mma! Ọ dị mma, abụọ ọzọ. Otu ọzọ.
Na triga. Mee ka ịdị arọ dị na bọọlụ ụkwụ gị dị nso na mkpịsị ụkwụ ukwu gị. Ọ na-enyere aka.
Ekike gị masịrị m, ị dị ọkụ. - Oh Chukwu m.- Ọ ga-eme ka ụkwụ gị kpoo ọkụ.
Ugbu a nọrọ ala. 90, anyị ka nwere 10. Ma gbadaa ala.
Anyi na-agbakwa oge, umu mmadu. Mmm hmm.Okay.- Ee, naanị, Achọrọ m ịnụ ụtọ oge ọkọchị.
Emere m July na enweghị igwefoto n'ihu m, yabụ - Woo! Ka anyị mee nke ahụ. Ndị mmadụ, anyị mere taa 30 nke 100 squat ịma aka. (Kids cheer) Obi dị m ezigbo ụtọ n'ihi na nke ahụ pụtara, mụ na gị, onye ọ bụla n'ime anyị nwere puku squat 3,000.
Oh chi m onye na-eme nke a. M nnọọ otú mpako na-aza ajụjụ. Nọgide na oge elekere 9 nke oge ndụ, echefughị ​​m ya.
Na na gị na gị nọrọ ebe ahụ na-azụ m, bie, kwa ụbọchị maka ụbọchị iri atọ. Oh Chukwu m, ukwu m siri ike, enwere m ike ma ọ dị m mma. Ọfọn, gbasara mgbanwe, obi, na uche, ọ na-adị m ka o siri ike.
Banyere ph ka anyị hụ ihe mere nri? Ya mere, 100 squats kwa ụbọchị, gbakwunyere m na-eme mgbatị ahụ na mgbatị ahụ, ọ bụghị mmezi, mana m gbanwere usoro mgbatị m, erikwara m ụdị usoro ntinye ụbọchị 28 ka m wee ghara ibu ibu n'ozuzu. Ya mere, ka anyị hụ ihe na-eme na usoro nke nọmba. Oge ikpeazụ m mere nke a bụ na 37 na nkeji iri na ise.
Ọ dịka ọ dị afọ iri atọ na asaa. Ka a sịkwa ihe mere, n’ihi na amaara m na ahụ m anaghị agbanwe nke ukwuu n’ihi mkpụrụ ndụ ihe nketa m, ọkachasị n’ogbe ahụ. Mana ọ dabere, ahụ niile dị iche.
Ahụrụ m ụfọdụ foto na Instagram nke ụmụ gị nwetara ihe ndị a, onye, ​​isi mgbanwe mgbe naanị ụbọchị 30. Ọ bụ ya mere na achọghị m ka obi jọọ gị njọ ma ọ bụrụ na ị gbanyebeghị mgbanwe anụ ahụ. Ọ dị mma? Cheta, ahụ gị bụ ọkpụkpụ anụ ahụ gị.
Karịrị akwara anụ ahụ gị. Ọ bụ maka ihe ọ bụla ọzọ mere n’oge ihe ịma aka a nke ụbọchị 30. You meriri mgbe ị chere na ị ga-akwụsị? ka ị nọgide na-aga n'agbanyeghị na ọ na-ewute ya nke ukwuu. Oge ndị a niile kụziiri gị ịdị na-ekwusi ike.
Ọ kuziri gị ike. Ọbụghị naanị na ọ ga - enyere gị aka ịmega ahụ, ọ ga - enyere gị aka n'akụkụ ndị ọzọ nke ndụ gị. Enwere m obi ụtọ maka gị na ị na-achịkwa m ihe ịma aka ahụ, nọgide na-arụ ọrụ ma nweta ya.
Ọ dịghị mfe. Aga m achọ ịme otu ọzọ, yabụ mee ka m mara na ihe ndị a kwuru n'okpuru akụkụ ahụ anyị kwesịrị ime ọzọ. O kwesiri idi ka nsogbu 100 Crunch? Ogwe aka 100? Achọghị m ime ihe ịma aka burpe 100, nke ahụ abụghị ihe m ga-eme yabụ ajụla m ma m ga-eme nke a.
Ngwa ndi oma, ekele m unu lee ozo. Ehee! ♪ Nọgide na-eme ihe ị na-eme ♪♪ Na-eme ihe ị na-eme ♪♪ Mee ihe ị na-eme ♪♪ Na-eme ihe ị na-eme
Ndi squats na-enyere aka?
Nasquatbụ quintessential mgbatị mmega ahụ ala ike. Mgbe ọkara-squatsna nkeji iri na isesquatsnwere ike ịpụta ebe mgbatị zuru okesquatga-eme n'ezieọrụnke giNgalabama ọ bụ isi. Push-Up. A push-elu bụghị naanịna-enyere akaị ga-enweta ahụ dị elu karịa ike, mana ọ ga-esikwa ike kọwaa etiti.Eprel 13 2016
Gịnị na-eme mba? M Scott si Muscularstrength.com na dị ka ị pụrụ ịhụ na anọghị m na-emebu studio. Anọ m na South Carolina ebe a na Muscle na Ike Studio.
Anọ m ebe a maka ụbọchị ole na ole gara aga na-eme ụfọdụ ederede dị mma nke m maara na ụmụ okorobịa ga-enwe ọ Soụ Ya mere, ọ bụrụ na ị hụbeghị ọwa YouTube ha, aga m etinye njikọ na ntinye m na-aza ajụjụ n'okpuru maka mgbe ịmechara ebe a, ị nwekwara ike ịlele isiokwu ndị a kwa, mana taa. Anyị ga-eweta akụkọ ifo na bed, ọ dị ka otu n'ime akụkọ ifo ndị ọgụgụ isi enweghị ike iguzo bros na-ekwu okwu na mgbatị ahụ. Ya mere umu nwoke meere m amara mgbe m lechara isiokwu a ma gee ntị n'ihe m ga-ekwu, mgbe ị nọ n'ụlọ mgbatị gị, ị na-anụ bros na-ekwu maka otu esi ewulite abs na ike na-akpali akpali Achọrọ m ka ị bịakwute ha ịkọwaara ha ọfụma ka anyị banye na Powerlifting vesos direct abs to build abs, nke ka mma na gịnị kpatara ya? mgbe ị na-ewulite akwara n'agbanyeghị ụdị akwara ị na-eme, chee echiche banyere mmega ahụ ọ bụla ị na-eme na mgbatị ahụ ike gị Gịnị bụ ihe abụọ kachasị mkpa kwesịrị ime? Ikwesiri ịgbatị na gbagọrọ agbagọ mgbe ị na-achọ iwu biceps gị, ịnweghị ike ịnọdụ ala ebe ahụ wee gbagọọ ike dịka ị nwere ike na enyo maka nkeji iri anọ na ise wee tụọ anya ka biceps gị too, ị nwere ike? Ka ndị biceps ahụ wee too, ịkwesịrị ime curl.
Have ga-enwe ndọtị zuru ezu iji gbatịa, mgbe ahụ ị ga-enwerịrị mgbanwe zuru ezu iji gbagọọ ịrụ ọrụ akwara ma kpalite uto ahụ. Need chọrọ mmebi akwara a nke ọma gịnị kpatara ndị mmadụ ji eche nke ahụ? N'ihe banyere ABS, otu echiche ahụ adabaghị ma ọ bụrụ na ị na-achọ iwu ụlọ na-adịghị mma? Ikwesiri ihulata ma dozie spain gị na otu ugboro ugboro iji rụọ ọrụ mpaghara iji wulite akwara ahụ mgbe ị na-eme ihe na-akpali akpali ma ọ bụ na-eweli ahụ dị ka squat na ndị na-egbu anụ, ee, ịme mmemme ndị a chọrọ ka ị gbagọọ isi gị niile, nke bụ Gụnyere abs na obliques iji kwụsie ike na njem ahụ, mana ị na-azụ akwara ndị ahụ nke ọma. Isi okwu a squat, deadlift, ma ọ bụ ogbe sere bụ iji jide n'aka na isi gị adịghị ehulata, ọ bụ dị ka nwere a isiokwu Mere na Akwara na Ike Crunch Nke Na-eme Ka Mma Publicity Mgbe ị na-eme plank dum nzube nke na ije bụ iji zere ịnweghari ma dozie ọkpụkpụ azụ.
okpu agha n'azụ igwe kwụ otu ebe ihe ịrịba ama nke nsogbu
Ọ bụ isi ikike inye ikike na echere m na ndị mmadụ nwere mgbagwoju anya n'ihi na ha na-eche na ha na-anụ isi okwu, ọ bụ n'ụzọ nkịtị naanị ABS, mana ọ bụghị ụmụ okorobịa. Cheta na ọ bụrụ na ị na-eme nnukwu squat ma ọ bụ na-egbu egbu n'ezie, buru ya ụzọ, ị ka na-emechi isi gị mana ị naghị etinye belt na-ebuli ibu. iji jide n'aka na ị 100% enweghị ụdị ntụgharị ma ọ bụ mgbatị ọ bụla ka ị ghara imerụ onwe gị ahụ mgbe ị nwụrụ ma mgbe ị na-abanye azụ zuru oke ị ga-afụ azụ gị, ọ dị mma? Ma mgbe ọ na-abịa ịzụlite akwara, ịkwesịrị ịbanye n'ọnọdụ a mgbe ị na-edina ala na-eme mkpọtụ iji nweta mgbatị na ndọtị ịkwesịrị iji wuo abs gị.
Ọ bụrụ na ịmebeghị otu mmega ahụ ị ga - enwe abụba dị ala You na - eri nri ma zụọ ma jiri ndụ gị niile You mara ọtụtụ n'ime ndị na - ebuli ihe dị elu ma ọ bụ ndị ahụ zuru oke na - eme ka isi gị sie ike, ị ga - nwee abs, ị ga-enwe ọdịdị nke etolite gị Mana ọ bụrụ na ịchọrọ na ndị abs ahụ na-agbapụta ma na-arapara n'ezie ma ịchọrọ ndị blocky abs? ị ga-a drinkụ ha nke ọma ma ọ bụrụ na ị nwere ike iwuli ihe na-adịghị mma site na ndị ahụ zuru oke, mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ịdị na-agagharị ụbọchị niile ka ị nwee ike ịmegharị ahụ gị ka o sie ike dịka ị nwere ike wee wuo ihe ndị ahụ ọ gaghị arụ ọrụ ma ọ bụ n'ihi otu ihe ahụ dịka m kwuru na mbido isiokwu ahụ, ịnweghị ike ịgagharị na-agbanwe biceps gị ụbọchị niile n'ihi na ị chere na nke ahụ ga-eme ka ha too. Chọrọ mkpali na-akpali akpali. Ndị be anyị, ka anyị tinye akụkọ ifo a n’elu ụra ugbu a.
Na mmechi, nka bu nkwubi okwu na aru zuru oke dika ihe di iche iche na ndi nwuru anwu na osisi nkpara bu ihe emere. Nke a ọ nwere ike inyere gị aka iwulite abs? Ee, mana ruo n’ókè ụfọdụ ma ọ bụrụ na ahụ gị abụba pasent dị obere nke a ga - enyere aka mee ka mpaghara ahụ sie ike ma ee, abs ga - ahụ anya mana ha na - ahụ anya naanị n’ihi na abụba abụba dị ala ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka etuto gị ma ịchọrọ ka ha gbawa iji wulite akwara iji mee ka ha dị ka ibu karịa ka a na-eme site na ịmegharị ihe na azịza ya bụ mba, ịkwesịrị ịme ọzụzụ ozugbo iji nweta nsonaazụ ndị a. Ya mere, ndị mmadụ, akụkọ ifo a na-ehi ụra ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na isiokwu ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwulite ụfọdụ mgbochi, m ga-ejikọta gị na edemede nke mmega ahụ m jiri nke nyere m aka nke ukwuu na-arụ ọrụ na mpaghara ahụ, yana maka ndị chọrọ mmemme zuru oke nke na-elekwasị anya n’ihe niile, gbaa mbọ lelee mmemme m na Muscularstrength.com.
M ga-atụfu njikọ ahụ na ntinye m na kwa ụmụ okorobịa, ihe ndị ọzọ dị mma na-abịa
Ndi squats na-arụ ọrụ n'ezie iji mee ka bum gị buru ibu?
Ikukusquatsdị mma maka ndị mbido, mana ọ bụrụ na ị nọlaedetun'ihi na ihe karịrị ọnwa isii na-adịghị hụrụisi gina-enwetaibu, Ikwesiri igbakwunye ibu, ka Arias na-ekwu. Dị ka akwara ọ bụla, ị ga-abawanye nguzogide ijinke gina-eto eto.Ọgọst 6 2020
Kedụ ka ị ga-esi rute afọ n ’izu abụọ jiri nnukwu butt?
Ijiiha ahanke giafọ, belata calorie 500 kwa ụbọchị n'ụdị nri, mmega ahụ, ma ọ bụ abụọ. Ọ bụkwa ezi echiche iji wulite mọzụlụ gịnweeihe kwesiri igosi! Abịa na annukwu ịkwakọrọ, ị ga-achọ ilekwasị anya na ịme mgbatị ụkwụ dị arọ dị ka squats, lunges, na igbe jumps.bọchị 2020
Ndi 100 squats ga eme ihe obula?
Na-eme 100 squats kwa ụbọchịenyerela aka itughari apata ụkwụ na nwa ehi. Ọ bụ ezie na ha adịghị agbaji, ha na-ada ụda olu ma na-ekele, na-enweghị akpa cellulite ọzọ. Ọfọn, ọ bụ echiche zuru ụwa ọnụ nasquatsbụ naanị maka ahụ gị.June 8. 2020bọchị 2020
Ndi 50 squats ga-eme ihe obula?
Nke a pụtara na ọ bụghị naanị na ha dị ukwuu na ntinye na ime ka ike gị na apata ụkwụ gị sie ike, ha bụ mgbatị ahụ kachasị mma maka akwara gị n'otu oge. Uru ndị ọzọ nwere ike ịgụnye ike na ụda dị ukwuu na azụ gị na akwara nwa ehi, yana mgbatị nkwonkwo ụkwụ na kwụsie ike.Eprel 7 2020
Ndi 100 squats na-arụ ọrụ kwa ụbọchị?
Na-eme100 squats kwa ụbọchịenyerela aka itughari apata ụkwụ na nwa ehi. Ọ bụ ezie na ha adịghị agbaji, ha na-ada ụda olu ma na-ekele, na-enweghị akpa cellulite ọzọ. Ọfọn, ọ bụ echiche zuru ụwa ọnụ nasquatsbụ naanị maka ahụ gị.June 8. 2020bọchị 2020
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anyị emee 100 squats kwa ụbọchị?
Na-ewusi Akwara Gị Ala Ike
Site na ịnọdụ ala n’oche wee bilie n’àkwà gị, akwara ụkwụ gị, quadriceps, adductors, ụmụ ehi, ndị na-emegharị hip, na ọmarịcha gị bụ ọrụ maka ọtụtụ mmegharịgịime.Squatting nwere ikenyere aka mee ka akwara niile dị n'elu dị na ahụ gị dị ike.Eprel 19 2021
Kedu ihe mgbatị kacha mma maka Butt na ABS?
Mmetụta 4 ndị a (squats, lunges, crunches, and planks) bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị dị irè maka ịchebe isi na abdominals. Otu esi eme ihe ịma aka a: Mezue mmemme e kenyere maka ụbọchị ahụ, na-ewere oge 30-60 nke abụọ n'etiti etiti ọ bụla.
Etu esi eme ụda ABS, Butt na apata ụkwụ na nkeji iri na ise?
Ya mere, ka ihe omume isii ndị a na-eme ka ụda gị daa, akwara na apata ụkwụ nwere ike ọ gaghị ahapụ gị ka ọsụsọ ma ọ bụ oke ọnya gị, ha ka dị oke mkpa maka usoro mgbatị ahụ nke ọma. Ime nke a nkeji iri na ise abs, butt na apata ụkwụ mgbatị ahụ ga-ewusi obere, na-eme ka uru ahụ dị n'ime apata ụkwụ gị na mpụta ndị ọzọ.
Enwere ihe ịma aka 30 ụbọchị Butt na ABS?
30 Day Butt na Abs Workout utma Aka. July 13, 2018. Ihe ịma aka mgbatị ụbọchị iri atọ nke emere iji kpọọ ma wusie ike gị. Zuru okè maka ndị mbido, ihe ịma aka a na-elekwasị anya abụọ 'mpaghara nsogbu' kachasị ma zuru oke ịme naanị ma ọ bụ na onye na-arụ ọrụ mgbatị.